Tababarihi Xulka Kubadda Cagta ee gobolka Bari oo iscasilay – Radio Daljir
Febraayo 4, 2013 6:18 b 0
Bosaso, Feb 04 – Tababarihii xulka? kubadda cagta ee gobolka Bari Shariif Maxamed Cadow oo loo yaqaano Gaabshe? ayaa maanta iscasilay kadib markii sida uu sheegay uu waayey dhowr bilood oo mushaar ahaan uu ulahaa.
Tababare Gaabshe oo u waramay barnaamijka Cayaaraha ee ka baxa Daljir? ayaa? sheegay in arintan uu ku dhaqaaqay kadib markii dhowr jeer cabasho la xiriirta mushaar la?aan uu ugudbiyey gudoomiyaha cayaaraha gobolka Bari Mustafe Majacase.
?Muddo lix bilood ah maanan qaadan wax mushaar ah mana aqaan sababta uu iiga maqanyahay musharkeyga.Cid igala hadashayna majirto arintaas? ayuu yiri Tababare Gaabshe.
Tababaraha maanta iska casilay kooxda kubadda cagta ee gobolka bari waxa uu kaloo sheegay in Xulka kubadda cagta ee gobolka Bari ay heysato wax qalab ah oo lagu horumariyo tayada iyo xirfada xiyaartoyda. Arintaasoo uu sheegay inuu dhowr jeer kala hadlay masuuliyiinta sportiga ee gobolka Bari.
Si kastaba ha ahaatee majirto wax war ah oo kasoo baxay wasaarada cayaaraha iyo dhalinyarada ee Puntland.
Xulka kubadda cagta ee gobolka Bari ayaa ka mid ah naadiyayaasha ugu firfircoon xagga isboortiga ee gobolka Bari, cayaarihii gobolada Soomaaliya ee sanadkii 2010kii kadhacay Garowe ayay yimaadeen fiinaalaha oo markii dambe koobka ay ka qaaday xulka kubadda cagta ee gobolka Banaadir.
Inkastoo magaalada Bosaso ay tahay magaalo wayn oo ganacsi ayaa hadana isboortiga oo kaalin waynaagsan ku leh hormarka dalka iyo nabadgalyada aysan jirin cid ka qaybqaadata taageeridiisa
Ismaaciil Xuseen Daahir (Steven)
Wasaaradda kalluumaysiga Puntland oo shir u qabtay ganacsatada kalluunka iyo daladaha hoosyimaada